बिटक्वाइनलाई मुद्राको रुपमा कानुनी मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र बन्यो अल साल्भाडोर, मूल्यमा उछाल Bizshala -
१० पैसाको फरकमा सेयर किनबेच गर्न पाइने व्यवस्था हुँदै
आफ्नो कदम सच्याउँदै धितोपत्र बोर्डः ५१ सहित सबै कम्पनीको पुनः सूची आउने, 'जोखिमयुक्त' शब्द हट्ने
लकडाउनले अवरुद्ध भोजमाण्डूको सेवा सुचारु
बिटक्वाइनलाई मुद्राको रुपमा कानुनी मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र बन्यो अल साल्भाडोर, मूल्यमा उछाल
काठमाण्डौ। अल साल्भाडोर बिटक्वाइनलाई मुद्राको रुपमा कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो देश बनेको छ।
मध्य अमेरिकी राष्ट्र अल साल्भाडोरको संसदले बिटक्वाइनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको हो। बिटक्वाइनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने विषयमा भएको मतदानमा यसको पक्षमा ८४ भोट परेको थियो भने विपक्षमा ६२ भोट परेको थियो।
अल साल्भाडोरले बिटक्वाइनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेसँगै विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको मूल्यमा उछाल आएको छ। आज बिहान यसको मूल्य १३.६० प्रतिशतले बढ्दै ३७१८२.४९ अमेरिकी डलर पुुगेको छ। बिटक्वाइनको मूल्य गत जनवरी ४ मा २७७३४ अमेरिकी डलरसम्म झरेको थियो।
बिटक्वाइनका साथ–साथै अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ। अन्य किप्टोकरेन्सी बिनेन्स, इथर, डजक्वाइन, कारडानो र एक्सआरपीको मूल्यमा समेत बढोत्तरी आएको छ।
विश्वको दोस्रो ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी इथरको मूल्य ५.२७ प्रतिशतले बढ्दै २५६६.४० अमेरिकी डलर कायम भएको छ। यस्तै बिनेन्स क्वाइनको मूल्य पनि १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। – एजेन्सी
विश्व सेयर बजारमा उछाल आउँदा लाखौँ बने करोडपति
एनएचपीसीको मूल्य रु. ३०० माथि, बुल सकिएको हो ?
बेष्ट फाइनान्सद्वारा हेलम्बुवासीलाई ४८ थान सोलार प्यानल सहयोग
असार १७ बाट आन्तरिक उडान पुनः सुरु हुने, ५० प्रतिशत क्षमतामा उडान भर्न दिइने
नेपाल टेलिकमको जीएसएम मोबाइल सिस्टममा आएको समस्या २ घन्टामै समाधान
काठमाण्डौ ।​ सन् २०२० मा विश्वका १ प्रतिशत वयस्क पहिलोपटक करोडपति...
चीनको प्रतिबन्धले बिटक्वाइनको मूल्यमा पहिरो
काठामान्डौ । चीन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै बिटक्वाइनको मूल्यमा...
यी हुन् बिल गेट्सले रुचाएका ५ पुस्तक, तपाइँ पनि पढ्नुस्,
काठमाण्डौ । माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक तथा विश्वका धनाढ्यमध्ये एक...
सफल महिला व्यवसायी बन्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यस्ता
काठमाण्डौ । कुनै पनि नयाँ व्यापार–व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अघि...
यी हुन् विश्वका १० सर्वाधिक महँगा सहर, चीन र स्विट्�
काठमाण्डौ । सन् २०२१ को लिभिङ इन्डेक्सका आधारमा बसोबासका हिसाबले...
चीनमा क्रिप्टोकरेन्सीहरुको कारोबारमा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौ । चीनले डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीहरुको कारोबारमा...
सेयरमूल्य घट्यो भनेर निराश नहुनुहोस्, डूबिसकेका अनिल अम्बानी
काठमाण्डौ । गत वर्षदेखि आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेको अनिल...
अमेरिकामा घरको भाउ आकाशियो, केन्द्रीय बैंक मूल्य नियन्त्रणमा
काठमान्डौ । कोरोना कहरबाट भर्खरै बाहिर निस्किँदै गरेका अमेरिकी...